Haddii Haaland Uu Ku Biiri Lahaa Real Madrid, Kaydka Ayuu Fadhiyi Lahaa Kulamada Waaweyn – Gool24.Net
Haddii Haaland Uu Ku Biiri Lahaa Real Madrid, Kaydka Ayuu Fadhiyi Lahaa Kulamada Waaweyn
Weeraryahanka da’da yar ee Borussia Dortmund ee Erling Haaland, waxa uu noqday hadal-haynta ugu badan ee suuqa iibka iyo ciyaaryahannada dunida usoo baxaya ee ay cid walba isha ku haysa, waxaana ugu horreeya naadiyada sida weyn loola xidhiidhinayo Real Madrid.
Kooxda reer Spain oo goolal yaraan ba’an ay haysato, ayaa waxay raadinaysaa dhaliye dabiici ah oo ay da’diisuna yar tahay, si uu sannado badan ugu sii sugnaan karo Santiago Bernabeu, waxaana xulashadooda ugu horreeya Kylian Mbappe iyo Erling Haaland.
Sidaas oo ay tahay, halyeygii reer Germany ee Lothar Matthaus, ayaa rumaysan in 19 jirkan ay u fiican tahay inii sii joogo Dortmund oo uu xirfaddiisa horumariyo ka hor inta aahnu ku biirin Real Madrid.
Matthaus waxa uu sheegay in haddii uu Haaland waqtigan tago Real Madrid uu tartan adag kala kulmi doono Karim Benzema oo ay kua dkaan doonto inuu booska ka riixdo, waxaanu usoo jeediyey inuu dhawr sannadood ku qaato Borussia Dortmund ka hor inta aanu tallaabada xigta qaadin.
“Haaland waa ciyaartoy si fiican ugu soo baxaya Real Madrid, laakiin wuu yar yahay, waxaanu u baahan yahay inuu ciyaaro.” Ayuu yidhi Lothar Matthaus.
Halyeyga reer Germany oo hadalkiisa sii wata waxa uu intaas raaciyey: “Isagu waa 19 jir, mana aha inuu waqtigan tago Madrid, halkaas oo laga yaabo in aanu ciyaarin kulamada waaweyn, sababtoo ah waxa uu tartan kala kulmi doonaa Benzema.
“Haaland waa inuu dhawr sannadood sii joogo Dortmund kaddibna uu tago Real Madrid. Waxay ila tahay inay taasi u wanaagsan tahay xirfaddiisa.”